यी कस्ती निष्ठुरी आमा! फेरि छोरी जन्मिएकि भन्दै १ दिने शिशुकाे छातीमा हसिया रोपेर गरिन ह”त्या! – PathivaraOnline
Home > समाज > यी कस्ती निष्ठुरी आमा! फेरि छोरी जन्मिएकि भन्दै १ दिने शिशुकाे छातीमा हसिया रोपेर गरिन ह”त्या!
admin February 16, 2020 समाज	0
एक दिनको नवजात शिशुको शरीरमा धारि’लो ह’तियार प्र’हार हुँदा मृ’त्यु भएको छ ।भारतको मध्य प्रदेशमा पुलिसलाई उद्धृत गर्दै भारतीय संचार माध्यमले दिएको जानकारी अनुसार आरोपी मञ्जुले फेब्रुअरी १३ मा अस्पतालबाट घर फर्कने बित्तिकै आफ्नी छोरीको छातीमा हँ’सिया प्र’हार गरिन् । त्यसपछि पेट र गर्धनमा पनि हम/ला गरिन् । शिशु चि’च्याएको सु’नेर छिमेकी घ’टनास्थल पुगेपछि मात्रै उनले ह’मला गर्न रोकेको बताएको छ ।
\_मञ्जुले छोरा नजन्मिएका कारण यस्तो गरेको बताइन्छ । मञ्जुको परिवारले शिशुलाई जिउँदो देखेर उनलाई शाजापुर जिल्ला अस्पताल पुर्‍याए । सुरुवाती उपचारपछि डाक्टरले नवजातको इन्दौरको एमवाय अस्पताल पठायो । त्यहाँ बालिकाको १४ फेब्रुअरीमा मृ’त्यु भयो ।
अन्य समाचार : नेपाली लिन वुहान पुग्यो जहाज काठमाडौँ। कोरोना भाइरसको उद्‍गमस्थल चीनको हुवेई प्रान्तको वुहान र आसपासका क्षेत्रबाट नेपालीहरु लिनका लागि नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी जहाज शनिबार राति चीनमा अवतरण गरेको छ । नेपाली समय ४ बजेर १ मिनेटमा निगमको वाइडबडी जहाज वुहानतर्फ उडेको थियो। विमान साँझ ८ बजे वुहानमा अवतरण गरेको चीनमा अध्ययनरत एक नेपालीले बताए।
यतिबेलाविमानमा लगेज राख्‍ने काम भइरहेको छ। त्यहाँको विमानस्थलमा कर्मचारीहरु कम भएका कारणले नेपालीहरुको ताप क्रम मापन र बोर्डिङ पास हुन केही ढिलाइ भएको छ। उद्धा रको पर्खाइमा रहेका नेपालीहरु शनिबार दिउँसै वुहानको एयरपोर्टमा जम्मा भएका थिए। वुहानबाट स्थानीय समयअनुसार रातको ११ बजे नेपाली नागरिकलाई लिएर निगमको वाइडबडी विमान काठमाडौं फर्कनेछ।आइतबार बिहान सवा २ बजे विमान काठमाडौंमा अवतरण गर्ने तालिका रहेकाे छ।
काठमाडौं आइसकेपछि चीनबाट फर्किएका १८२ जनालाई कम्तीमा १४ दिन भक्तपुरको खरिपाटीमा अवस्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तालिम केन्द्रमा राखिनेछ। विमानका ‘क कपिट क्रु’लाई कम्तीमा एक हप्ता आइसोलेसनमा राखिनेछ भने बाँकी ‘क्या बिन क्रू’ लाई भने १४ दिन नै क्वारेन्टाइनमा राखिनेछ। नेपाल एयरलाइन्सको अपरे सन डिपार्टमेन्टका क्या प्टेन दीपु ज्वारचनका अनुसार चीन जाने विमानमा एक विदेशी र एक नेपाली गरी दुई जना पाइलट, ६ जना क्याबिन क्रु, १ जना इन्जिनियर, १ जना फ्लाइट डिस्प्याचर, १ जना लोड मास्टर र ४ जना नेपाली सेनाका चिकित्सक छन्।